တံတားကနေ Osmangazi,3နှစ်ရှောက်သွားသောအခါအာမခံမော်တော်ကား၏တစ်ဝက်အထိ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 Kocaeliတံတားကနေ Osmangazi,3တစ်နှစ်, ထိုအာမခံတစ်ဝက် Tools များ Up ကို Gone
တံတားကနေ Osmangazi,3တစ်နှစ်, ထိုအာမခံတစ်ဝက် Tools များ Up ကို Gone
11 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, အထွေထွေ, hyperlink များ, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 1
ယာဉ် gecti အာမခံအခါတံတားကနေတစ်ဝက်တစ်နှစ်အဖြစ် osmangazi
ဇူလိုင် 2016 2019 spanning Osmangazi တံတားနှောင်းပိုင်း3သန်းယာဉ်များဇွန်လတွင်စတငျနှင့်သတင်းများအရ 22 နှစ်ပေါင်း။ တံတားများအတွက် 14 600 တထောင်နှစ်ပေါင်းသန်း (3 နှစ်ပေါင်း 43 800 တထောင်သန်း) တစ်ဦးအာမခံအဆင့်မြှင့်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
ဆူးပင်များ၏အပြောင်းအရွှေ့၏သတင်းအဆိုအရOsman ဖွငျ့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးအထွေထွေညွှန်ကြားမှု, ထိုဂုဏ်ထူးဆောင်Adıgüzel၏ CHP လက်ထောက်ဥက္ကဌတည်ဆောက်-operate-လွှဲပြောင်းမော်ဒယ်စစ်ပြန်တံတားများအတွက် cimer ရန်သူ၏လျှောက်လွှာကိုမှတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
ဖြေဆိုသည်: (İzmitဂလားပင်လယ်အော် Crossing နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းလမ်းများအပါအဝင်) "Gebze-Orhangazi-İzmirအဝေးပြေး Build-Operate-လွှဲပြောင်း Project ထဲတွင်; 1 အဆိုပါ Osman Gazi တံတားတွင်တည်ရှိသည်။ 40.000 ကားတစ်စီးအသွားအလာအာမခံချက်ညီမျှ / နေ့ခုတ်ဖြတ်။ စုစုပေါင်း 2016 2019 22.306.468 ဇူလိုင်လကနေဇွန်လမှအလိုအလျောက်ညီမျှကားတစ်စီးသမိုင်း။ "
နေ့စဉ်အတွက်အော်ပရေတာသို့မဟုတ်နှစ်စဉ်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောလူနာအရေအတွက်ကအဖြစ်ကတိကဝတ်ရှိပါတယ်အပါအဝင်ကုမ္ပဏီများနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဝင်ရောက်ခွင့်သဘောတူညီချက်များအမျိုးမျိုးအတွက် Build-operate-လွှဲပြောင်းမော်ဒယ်စီမံကိန်းများ။ ဤရွေ့ကားကတိကဝတ်ခြားနားချက်များအတွက်အော်ပရေတာကုမ္ပဏီမှပြည်နယ်၏ငွေပေးချေမှုအတွက်အတူတကွကပ်လျက်တည်ရှိကြသည်မဟုတ်။ ပေးပြီနိုင်ငံခြားငွေကြေးအာမခံချက်မှရည်ညွှန်းသောကြောင့်ငွေပေးချေမှုဖလှယ်၏အခြေခံပေါ်မှာထားလျှင်။
'' နိုင်ငံသားများကသူ့အိတ်ကပ်ထဲက ထွက်. ''
စေငွေပေးချေမှု၏နိုင်ငံသားများအပေါ်ပေးဆောင်အခွန်ပေးသောအော်ပရေတာကုမ္ပဏီ၏ပြည်နယ်ပြန်ခေါ် CHP Adıgüzel, said: "လတစ်လရဲ့အကူးအပြောင်းအရေအတွက်ဝင်လာသောတုံ့ပြန်မှုကျနော်တို့နိုင်ခြင်းနှစ်နှင့်မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားသည်နှင့်အညီမပေးသည့်ကုမ္ပဏီများမှပေးဆောင်ပမာဏနှင့် ပတ်သက်. ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့တွက်ချက်မှုဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့် $ 88.75 ထက်ကြမ်းတမ်းတွက်ချက်မှုကအချိန်တွင်ဖွင့်လှစ်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့တောင်မှကျနော်တို့ Osman ကအနည်းဆုံး 23.26 ပေါင်စစ်ပြန်တံတားများအတွက်အိတ်ကပ်ထဲကပေးဆောင်ခဲ့သည်တိုင်းနိုင်ငံသားရှောက်သွားတံတားဖြတ်ပြီးမရကြဘူးတစ်မော်တော်ကားတံတားများအတွက်အလိုရှိသော။ "
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ Yavuz Sultan Selim တံတား (xnumx'üncတံတား) နှင့် Osman Gazi တံတား3တစ်နှစ်အကူးအပြောင်းအနည်းဆုံး 2018 ဘီလီယံကိုပေါင်ပူးတွဲမပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများသို့ပေးဆောင်ပါလိမ့်မည်ကြေငြာခဲ့သည်အာမခံပါသည်။
ဝန်ကြီးချုပ် Yildirim ယာဉ်များ၏နံပါတ် Yildirim တံတားဖြတ်သန်းကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် 10 / 07 / 2016 ဝန်ကြီးချုပ် Yildirim ယာဉ်များ၏နံပါတ် Yildirim တံတားဖြတ်သန်းကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်: န်ကြီးချုပ် Binali Yildirim, Yildirim တံတားအနီးတွင်ပြီးခဲ့သည့် 8 760 တထောင်ယာဉ်များတစ်ရက် pass ကပြောသည်။ လျှပ်စီး, Yavuz Sultan Selim တံတားကိုလည်းသြဂုတ်လ 26 အတွက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်ကြေညာခဲ့သည်။ ဝန်ကြီးချုပ် Binali Yildirim, Osmangazi တံတား၏အဘို့ဆောင်သောပွဲစဉ်အတွင်း 1 760 တထောင်ဝန်းကျင်ယာဉ်များ၏ကျမ်းပိုဒ်ဇူလိုင်လအတွင်းဖွင့်လှစ်ထားသူကပြောပါတယ်။ Yildirim တံတားအလွန်ကြီးမားသည်ဆိုသည်ကား, Yavuz Sultan Selim တံတားအတွက်ကမ္ဘာ့အကျယ်ဆုံးတံတားသြဂုတ်လအတွင်းကကြေညာ 26 ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်။ ခရိုင်Altınovaဝန်ကြီးချုပ်Yıldırımမှ Izmit ကနေလမ်းနှင့်အတူ Yalova, Yildirim တံတားအလှည့်အတွက်ကားတစ်စီးဆင်းသက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ turnstile မှာသူ့ကိုစောင့်နေ Yalova အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Tugba ...
Osmangazi သန်းအတွက်အာမခံတံတားနောက်ဆုံး 146သန်းယာဉ် 03 / 10 / 2017 Osmangazi တံတားပြီးခဲ့သည့်လကမော်တော်ယာဉ်များ 12 ၏နံပါတ်, 14 သန်းယာဉ်များအာမခံ၏နံပါတ်ပင်တစ်ဝက်မရောက်နိုင်ဘူး။ ဤအခြေအနေသည်မိုးသည်းထန်စွာအခွန်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကြုံတွေ့ရဖို့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Osmangazi တံတားနိုင်ငံသားများ၏အိတ်ကပ်နှိပ်ထားပါသည်။ CHP အစ္စတန်ဘူလ်ဒုတိယဂုဏ်ထူးဆောင်Adıgüzelမှတုံ့ပြန်မှုသတင်းအချက်အလက်များအတွက်လျှောက်လွှာအပေါ်အခြေခံပြီး, ဇူလိုင်လ 2016 ဇူလိုင်လ 2017 အတွက်နေ့စဉ်မော်တော်ယာဉ်အာမခံ 40 တထောင်, ထိုအာမခံနှစ်စဉ်မော်တော်ယာဉ် 14 သန်း 600 ကြိမ်အတွင်း Osmangazi တံတားကနေပေးဆောင် tool များ၏အရေအတွက်6သန်း 159 တထောင် xnumx't ခဲ့ ။ , သတင်းအချက်အလက်များအရ (အ Izmit ဂလားပင်လယ်အော် Crossing နှင့် Access လမ်းများအပါအဝင်) Gebze-Orhangazi-Izmir Gebze-Orhangazi အဆိုပါ 685 ကားလမ်းအပိုင်းမှာတော့ (Osmangazi တံတားအပါအဝင်) အဝေးပြေးလမ်းမကြီးအောက်မှာ ...
အဆိုပါစျေးမှာပြစ်ဒဏ်တံတားကနေ Osmangazi ယိုစိမ့် 13 / 07 / 2016 Osmangazi တံတားပေါ်ဆွေးနွေးမှုများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ်၏ဇွန်လအတွက်ဖွင့်လှစ်စဉ် 30 တံတားပေါ်ပထမဦးဆုံးဝါကျရေးသားဖို့စတင်ခဲ့ပြီ Osmangazi တံတားဟာယိုစိမ့်နောက်ဆုံးဝါကျတုန်လှုပ်စေခဲ့တယ်။ ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန် Osmangazi တံတား၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ပထမဦးဆုံးဝါကျခွင့်ပြုပင်လယ်အော်အတွင်းရှောက်သွားသောအခါပါဝင်မှု 30 နှင့်3မိနစ်နှင့်အတူဇွန်လအတွက်အဖွင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ တံတားကနေ Osmangazi, အားလပ်ရက်ဖြတ်သန်းခစတင်ခဲ့ပြီးနောက်တနင်္လာနေ့နံနက်အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းအခမဲ့ပွဲသို့ပြောင်းသောအခါ။ , တံတားဖြတ်သန်းခများအများကြီးစျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားသောယုံကြည်သူနိုင်ငံသားများ, ကုမ္ပဏီမနေ့ကအခကြေးငွေများဖျက်သိမ်းခြင်းများအတွက်တရားစွဲခံခဲ့ရသည်။ Osmangazi တံတားကုမ္ပဏီရှေ့နေများကအဖိုးအခ, အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုအုပျခြုပျရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏နိယာမရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုမဟုတ် ...
ဖြတ်သွားထံမှ Osmangazi တံတားအများဆုံးသူ့ကိုအံ့အားသင့် 13 / 07 / 2016 ဖြတ်သွားထံမှ Osmangazi တံတားအများဆုံးသူ့ကိုအံ့အားသင့်: အားလပ်ရက်နှင့်ပွဲတော်များ 1 သန်းနိုင်ငံသားများကာလအတွင်းအလွန်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားကိုမြင်လျှင်အကူးအပြောင်း Osmangazi တံတားဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်အခြားအသေးစိတ်အာရုံစိုက်ဆွဲငင်ထားကိုအသုံးပြုပါ။ Gebze-Orhangazi-Izmir ကားလမ်းနှင့်ပင်လယ်ကွေ့ Crossing တံတားစီမံကိန်း Orhangazi ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့သောကြောင့်အလျားနှင့်အတူအာရုံကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်အချိန်တိုအတွင်းလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာများစွာသောအသုံးပြုသူများနှင့်အဆိုပါပြီးစီးခဲ့တံတား2နှစ်ပေါင်းဆောက်လုပ်ရေး၏ 14 နှစ် Bolu တောင်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမှကိုးကားစေသည်, ဧရာဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဖို့အာရုံကိုဆွဲပါ။ တူရကီ၌ကြီးသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 13 နှစ်ပေါင်းတွေနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာရွေ့လျား၏နားလည်မှု '' လမ်းယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပါတယ် '' ...
Osmangazi ကနေအကူးအပြောင်း5တထောင်၌ နေ. တံတား 01 / 08 / 2016 Osmangazi ကနေအကူးအပြောင်း5တထောင်၌ နေ. ပေါင်းကူး: နိုင်ငံသားများ, စျေးကြီး Osmangazi တံတားကနေအကူးအပြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နေ့စဉ်အရေအတွက်ပြည်နယ်အကူးအပြောင်းကိုအသုံးပြုသည် 40 တထောင် 5-6 တထောင်အတွက်တံတားတည်းခိုကြောင်းအာမခံချက်ကိုပေး၏။ မြန်ကူးတို့အဆိုအရ; ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတစ်နေ့၏ပြည်နယ်အသွင်ကူးပြောင်းမှုဆုံးရှုံးမှုများအတွက် 35 ရာခိုင်နှုန်းပိုစျေးကြီး။ အဆိုပါသေဆုံးသူတံတား၏အလွန်အကျွံကုန်ကျ Nilufer နှစ်ပတ်အတွင်းအတွက်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ 11-26 16 တထောင်ယာဉ်များတစ်ရက်ယခုမှသာကာလဇူလိုင်လ 100 ရက်စွဲများကိုဖုံးအုပ်ထားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစျေးကြီး drives တွေကိုသေဆုံးသူကိုရှာဖွေသူ TAV လည်ပတ်ကြောင်း Ido အချိန်ထောင်ဒဏ်ခဲ့သည်။ တိုင်းနှစ်ပတ်အတွင်း 40 60 သန်းပေါင် (အကြောင်းကို 20 သန်းဒေါ်လာ) တထောင်ကားများတစ်ရက်ကျမ်းပိုဒ်အာမခံသောပြည်နယ်များ၏အိတ်ကပ် ...
Yavuz Sultan Selim တံတား
အလင်းရထားစနစ်စီမံကိန်းများအတွက် Trabzon လှုပ်ရှားမှုအောင်မြင်ပြီး!
Kömürhanတံတားကမ္ဘာကြီးကို4။ အဆင့်
rayhab ဖြစ်ပါသည် ဟုသူကဆိုသည်:
ဝန်ကြီးချုပ် Yildirim ယာဉ်များ၏နံပါတ် Yildirim တံတားဖြတ်သန်းကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်
Osmangazi သန်းအတွက်အာမခံတံတားနောက်ဆုံး 146သန်းယာဉ်
အဆိုပါစျေးမှာပြစ်ဒဏ်တံတားကနေ Osmangazi ယိုစိမ့်
ဖြတ်သွားထံမှ Osmangazi တံတားအများဆုံးသူ့ကိုအံ့အားသင့်
Osmangazi ကနေအကူးအပြောင်း5တထောင်၌ နေ. တံတား
Osmangazi အဆိုပါ 8 သန်းယာဉ်များတူရကီလူတွေကိုပေးဆောင်မည်သေဆုံးသူတံတားဖြတ်သန်း!
Osmangazi တံတားဟာမနက်စောစောအားလပ်ရက် (ဗီဒီယို) ၏အဆုံးတိုင်အောင်, တာဝန်ခံအခမဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်
တစ်ဦးကတရားစွဲဆိုမှု Osmangazi တံတားကနေကောက်ခံအခကြေးငွေ၏ပလပ်ခြင်းအဘို့အတရားစွဲဆိုခဲ့သည်
ယင်းငွေပေးချေမှုရမည့်အာမခံချိန်ညှိခြင်း Yavuz Sultan Selim တံတား Setup ကို
နှောင်းပိုင်း Osmangazi တံတား, $ 40 အဘို့အသွား